Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo iska dhiibay Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo iska dhiibay Gobolka Baay
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab uu isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan magaaladaas.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in Sarkaalkan uu Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada Gobolka Baay.
Wararka ayaa sheegaya in Sarkaalkan uu la soo xiriiray, saraakiisha ciidamada, kaddibna waxaa loogu tagay meel duleedka ka ah magaalada Baydhabo.
Sarkaalkan oo aan wali la sheegin magaciisa, ayaa la filayaa in loo soo bandhigo saxaafada, waxaana hada lagu hayaa meel ammaan ah.
Mas’uuliyiinta Maamulka Koofur Galbeed ayaa sheegay inay sii kordhayaan askarta iyo saraakiisha ka tirsan Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya maamulkooda.
Wararka11 mins ago